मिनी क्यासिनो : गुन्डादेखि प्रहरीसम्मको लगानी, जुवा अखडामा नायिकादेखि पूर्वमन्त्रीसम्म ! | Seto Khabar
मिनी क्यासिनो : गुन्डादेखि प्रहरीसम्मको लगानी, जुवा अखडामा नायिकादेखि पूर्वमन्त्रीसम्म !
काठमाण्डौ । सानेपाको प्रहरी बिटबाट करिब ३० मिटरको दूरीमा चारकोल लाउन्ज एन्ड बार छ । रेस्टुरेन्टसँगै एउटा साढे दुईतले घर छ । उक्त घरमा करिअर डेभलपमेन्ट ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटको नाममा बोर्ड टाँगिएको छ । तर, त्यहाँ करिअरसम्बन्धी कुनै तालिम दिइँदैन । जुवा खेल्न सिकाइन्छ । इन्स्टिच्युटको आवरणमा उक्त घरमा विगत ६ महिनादेखि गोप्य रूपमा मिनी क्यासिनो सञ्चालन हुँदै आएको थियो ।
गत शुक्रबार साँझ नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) बाट छापा हान्न गएको टोली त्यहाँको वातावरण देखेर चकित भयो । ‘क्यासिनोमा भन्दा त्यहाँ केही कम थिएन,’ छापा हान्न गएकी सिआइबीकी एसपी मीरा चौधरी भन्छिन्, ‘खानपिनको व्यवस्थासहित क्वाइनहरू राखेर जुवा चलिरहेको थियो ।’ तास बाँड्ने र हिसाब राख्ने युवतीहरू थिए । खेलाडीलाई मदिरा र खानपिनको व्यवस्था गरिएको थियो । क्यासिनोमा जस्तै ५ वटा टेबल राखेर त्यहाँ जुवा खेलाइन्थ्यो । हरेक दिन बिहान, दिउँसो र बेलुका जुवा चल्थ्यो । सिआइबीले ८ युवतीसहित २३ जनालाई त्यहाँबाट पक्राउ गर्‍यो ।
क्यासिनोका सेयरहोल्डरहरू तारा शर्मा रिजाल र कपिन नागपाललाई समेत पक्राउ ग¥यो । ‘पक्राउ पर्नेहरू धेरै पेसेवर जुवाडे थिए,’ सिआइबीका डिएसपी ज्ञानेन्द्र फुँयाल भन्छन्, ‘जुवाबाट उनीहरूले आफ्नो परिवार र सम्पत्ति डुबाइसकेका थिए ।’ पक्राउपछि धेरैले पछुतो मानेका थिए । तर, नशा लागेकाले छाड्न नसकिएको पक्राउपछि उनीहरूले बताएका छन् ।
मिटरब्याज लगानीकर्ताको मिनी क्यासिनो
सानेपाको उक्त मिनी क्यासिनोका सञ्चालक रमेश अग्रवाल हुन् । जो सोल्टी होटेलमा रहेको माजोङ क्यासिनोमा टेबुल चलाउँछन् । जुवा खेल्नेहरूलाई उनी पैसा पनि लगानी गर्छन् । नेपाली ग्राहकलाई छिराउन समस्या भएकाले उनले त्यसरी गोप्य क्यासिनो खोलेका हुन् । सिआइबीका अधिकारीका अनुसार पक्राउ परेका ८ युवतीमध्ये केही माजोङ क्यासिनोकै कर्मचारी हुन् । जहाँ ठ्याक्कै क्यासिनोकै शैलीमा जुवा खेलाइने गरिएको थियो ।
राजधानीमा यस्ता गोप्य जुवाघरहरू गल्ली–गल्लीमा छन् । एकान्त स्थानका घर, अपार्टमेन्ट, रिसोर्ट तथा होटेलमा जुवा खेलाइने गरिएको छ । कतिपय स्थानमा प्रहरीको मिलेमतोमा अवैध मिनी क्यासिनो सञ्चालनमा छन् भने केही अवस्थामा प्रहरीले छापा हाने पनि छुटेपछि फेरि सञ्चालन हुने गरेका छन् । काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी छविलाल जोशी भन्छन्, ‘धेरै ठाउँमा गोप्य रूपमा जुवा खेलाइन्छ भन्ने सुनिन्छ, हामीले सूचना पाएसम्म छापा हानिरहेका छौँ ।’
पार्टी प्यालेसदेखि होटेलसम्म
गत शुक्रबार सिआइबीले सानेपामा छापा हानिरहँदा महानगरीय प्रहरी वृत्त अनामनगरको टोली अनामनगरको एक घरमा जुवाडेहरूलाई पक्राउ गर्न पुगेको थियो । ६७ हजार पाँच सयसहित प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गर्‍यो । उनीहरू आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट साधारण तारेखमा छुटे । पक्राउ पर्नेमा तीन पत्रकार पनि थिए । उनीहरूसमेत नियमित रूपमा जुवा खेल्ने गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
पछिल्लो समय धेरैजसो होटेलमा क्यासिनो सञ्चालन हुने गरेको छ । गत वर्ष ठमेलको नेपालय होटेल तथा नक्सालको गणपति होटेलबाट ठूला जुवाडे पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै नयाँ बजारको एक पार्टी प्यालेसमा पनि नियमित रूपमा जुवा खेलाइने गरेको सूचनाका आधारमा छापा हानी जुवाडेलाई पक्राउ गरिएको महानगरीय प्रहरी वृत्त सोह्रखुट्टेका डिएसपी सोमेन्द्रसिंह राठौर बताउँछन् । त्यस्तै राजधानी आसपासका रिसोर्टहरूमा पनि जुवा खेलाइने गरिएको छ ।
हरेक हप्ताजसो राजधानीमा जुवा खालबाट जुवाडे पक्राउ पर्छन् । सानातिना अखडाबाट जुवाडेहरू भटाभट पक्राउ परे पनि ठूला अखडाबाट भने कहिलेकाहीँ मात्र पक्राउ पर्ने गरेका छन् । ठूला मिनी क्यासिनोमा पहुँचवाला व्यक्ति नै जुवा खेल्न जाने भएकाले प्रहरीले ती अखडामा छापा मार्ने आँट गर्दैन । कतिपय अखडामा प्रहरीसँगै सेटिङ हुने गरेको छ ।
गुन्डादेखि प्रहरीसम्मको लगानी
धेरैजसो गोप्य जुवाघर गुन्डागर्दीमा संलग्न व्यक्तिले चलाउने गरेका छन् । काभ्रेली समूहका दावा लामाले जुवा खेलाएर करोडौँ कमाएका छन् । गत दसैँमा डिल्लीबजारको एक जुवा अखडामा उनले जुवाडे प्रदीप बोगटीलाई नै कुटपिट गरी पैसा लुटेको उजुरी प्रहरीमा पुगेको थियो ।
जुवा खेल्नेहरूलाई चेक, गाडी तथा लालपुर्जा धितो राखेर चर्को ब्याजमा पैसा लगाउने गर्छन् । पैसा फिर्ता नदिए उनीहरूले धितो कब्जा गर्छन् । यसरी जुवामा पैसा लगाएर दर्जनौँ व्यक्ति करोडपति भएका छन् । जसमा बलराम सापकोटा, अजयमान श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ, अरुण सेढाईं, राम लामा, कविन शाक्यलगायत व्यक्ति जुवाबाटै करोडौँ कमाउने व्यक्तिमा पर्छन् ।
केही प्रहरी अधिकारीसमेत नियमित रूपमा जुवा अखडामा जाने र पैसासमेत लगाउने गरेका छन् । करिब दुई महिनाअघि अपराध महाशाखा र काठमाडौं परिसरले रोयल क्यासिनोमा छापा हान्दा आफ्नै हाकिमलाई फेला पारेको थियो । केही अवकाशप्राप्त प्रहरी अधिकारीहरूमा जुवाको लत छ । त्यस्तै, सैनिक अधिकारीहरूले समेत आफ्नै घरमा जुवा खेलाउने गरेका छन् । सेनाको घर भनेपछि प्रहरीले पनि हत्तपत्त छापा नहान्ने भएकाले सैनिकका घरहरूमा पनि पेसेवर रूपमै जुवा खेलाउने गरिन्छ ।
गत वर्ष जेठमा ठमेलको मनाङ होटेलमा सञ्चालित मिनी क्यासिनोमा प्रहरीले छापा हानी राप्रपा नेपालका केन्द्रीय सदस्य भुजुङ गुरुङसहित २४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । नल्र्याङ सेवा समाजको कार्यालयमा बाहिरबाट ताला लगाएर त्यहाँ नियमित रूपमा जुवा खेलाउने गरिएको खुलेको थियो ।
क्यासिनोमा यसरी छिराइन्छ नेपाली
अहिले राजधानीका क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेशमा निकै कडाइ छ । तर, पनि चोरबाटोबाट आफ्ना नियमित ग्राहकलाई क्यासिनोले छिराउने गरेका छन् । भारतको नक्कली रासनकार्ड बनाएर नेपालीलाई क्यासिनोमा छिराउने गरिएको छ । गत पुसमा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटीले अजय साहको नाममा बनाइएको नक्कली रासनकार्ड लिएर क्यासिनो छिरेका श्रवणकुमार शाहीलाई पक्राउ गरेको थियो ।
हाल राजधानीमा सोल्टीमा माजोङ, याक एन्ड यतीमा रोयल, सांग्रिलामा द मिलिनियर्स क्लब, र्‍याडिसनमा क्यासिनो ¥याड र हायातमा प्राइड क्यासिनो सञ्चालनमा छन् । अन्नपूर्ण र मल्ल होटेलमा पनि क्यासिनो सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ ।
मदिरा, वेश्यावृत्ति र जुवा
मान्छेका तीन कुलतमध्ये मदिरा, वेश्यावृत्ति र जुवा पर्छन् । हाल खुलेका मिनी क्यासिनोहरूमा यी तीनै कुरा उपलब्ध हुन्छ । प्रहरीले छापा हानेका सबैजसो मिनी क्यासिनोबाट युवतीहरू पक्राउ पर्छन् । गत शुक्रबार सानेपास्थित जुवाघरबाट पनि ८ जना युवती पक्राउ परेका थिए । त्यसमध्ये केही खेलाडी तथा केही जुवाडेलाई सेवा दिन राखिएका थिए । जुवा सञ्चालकहरूले खेलाडीलाई आकर्षित गर्न यसरी युवती राख्ने गरेका छन् । त्यस्तै मदिरा पनि निःशुल्क खुवाउने गरेका छन् ।
मोबाइल क्यासिनो फस्टाउँदो
एकै स्थानमा जुवा खेलाउँदा प्रहरीले छापा हान्न सक्ने भएकाले ठाउँ फेर्दै जुवा खेलाउने गरिएको छ । खासगरी होटेल तथा रिसोर्टका कोठाहरू भाडामा लिएर मोबाइल क्यासिनो सञ्चालन हुने गरेको छ । नियमित जुवा खेल्ने व्यक्तिहरूलाई मात्र जानकारी दिएर यसरी जुवाखाल सञ्चालन हुने गरेको छ ।
जीवन नेपाल कुनै समय पूर्वका चर्चित व्यवसायी थिए । मारुती सिमेन्टका मालिकसमेत रहेका उनी अहिले गुमनाम छन् । क्यासिनोकै कारण उनी करोडपतिबाट सडकमा झरेको उनका आफन्तहरू बताउँछन् । त्यस्तै बालाजुका जग्गा व्यापारी केशव रायमाझी पनि क्यासिनोबाटै डुबे । क्यासिनोबाट घरजग्गा तथा सम्पत्ति सिध्याउनेहरूको सूची लामै हुन्छ । निर्देशक ज्ञानेन्द्र देउजाले पनि क्यासिनोमा जुवा हारेपछि आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेका थिए । ‘जुवा सबैभन्दा डरलाग्दो नशा हो,’ काठमाडौंका घर बेचेर भाडामा बसेका एक जुवाडे भन्छन्, ‘जुवाखाल मसानघाट हो, जहाँ पुगेपछि फर्कन गाह्रो छ ।’
जुवाले बढायो अपराध
जुवा अपराधको एउटा कारण बनेको छ । दुई महिनाअघि विराटनगरका विष्णु डाँगाले काकी दीपा र भाउजू अस्मिता भट्टराईको गोली हानी हत्या गरे । भारतीय नागरिकको रासनकार्ड बनाएर उनीहरू होटेल रत्नामा रहेको मिनी क्यासिनोमा जाने गरेका थिए । उनी चर्को ब्याजमा पैसा लिएर जुवा खेल्थे । पैसा हारेपछि घर बेचे । घर बेचेर पनि पैसा तिर्न नसकेपछि उनले दाइ रामसँग पनि पैसा लिएका थिए । पैसा नतिर्न उनले परिवारकै हत्या गर्ने योजना बनाएका थिए । सोहीअनुसार भारतबाट पेस्तोल किनेर ल्याई हत्या गरेका थिए ।
क्यासिनोकै लतमा लागेपछि वीरेन प्रधानले ८ वर्षअघि ख्याति श्रेष्ठको हत्या गरेका थिए । कुनै समय राजधानीमा अपहरणको आतंक मच्चाउने प्रह्लाद महत क्यासिनो जानका लागि नै अपहरणमा लागेका थिए ।
जुवाकै कारण ज्यान गयो
प्रहरी आएपछि जुवाखालबाट भाग्ने क्रममा एक व्यक्तिको मृत्युसमेत भएको छ । कोटेश्वरको सहयोगी नगरमा तीनतलाबाट खसेर डेढ वर्षअघि झपटबहादुर शाहीको मृत्यु भएको हो । उनी अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारी हुन् ।
शाहीले आफ्नै घरमा जुवा खेलाइरहेको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी वृत्त बानेश्वरले दिउँसो करिब १ बजे छापा हानेको थियो । प्रहरी पक्राउ गर्न आएको थाहा पाएपछि उनी झ्यालबाट भाग्न खोजेका थिए । घरको टपबाट भाग्न खोज्दा चिप्लिएर उनी लडेको र उपचारको क्रममा मृत्यु भएको थियो । भाग्ने क्रममा छतबाट खसेर घाइते भएका घटना थुप्रै छन् ।
लाखौँको जुवा, २ सय जरिवाना
जुवाको समाजमा ठूलो असर भए पनि कारबाही भने सामान्य मात्र हुने गरेको छ । गत शुक्रबार अनामनगरबाट पक्राउ परेका ५ जुवाडेलाई आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले साधारण तारेखमै छाड्ने आदेश दियो । जुवा ऐनमा पहिलोपटक पक्राउ परेकालाई २ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । त्यसकारण मुद्दा चले पनि उनीहरू बढीमा २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिरेर छुट्ने गर्छन् । पटक–पटक पक्राउ परेमा एक वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रावधान भए पनि प्रहरीले विगत नखोजी मुद्दा चलाउने गर्छ । त्यसमा पनि २४ दिनसम्म थुनामा राख्न पाउने अधिकार भए पनि पक्राउ परेको २–४ दिनमै प्रहरीले मुद्दा बुझाउने गरेकाले पक्राउ परेपछि जुवाडेहरू सहजै छुट्छन् । छिट्टै छुट्ने भएकाले परिवारले पक्राउ परेकोसमेत थाहा पाउँदैनन् । जसकारण पक्राउ परे पनि जुवाडेहरू नसुध्रिई छुटेलगत्तै पुनः जुवामै लाग्ने गरेका छन् ।
क्यासिनोमा कडाइपछि मिनी क्यासिनो
करिब ५ वर्षअघिसम्म पाँचतारे होटेलमा रहेका क्यासिनोमा नेपालीलाई प्रवेश सहज थियो । तर, काठमाडौं परिसरमा एसएसपी रमेश खरेल आएपछि क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशमा कडाइ हुँदै गयो । खरेलले रोयल क्यासिनोका सञ्चालक रहेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहलाई समेत पक्राउ गरी मुद्दा चलाए । त्यसपछि काठमाडौंका क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशमा कडाइ हुँदै गयो । २ वर्षअघि आएको क्यासिनो व्यवस्थापन नियमावलीले नेपाली प्रवेश गरे लाइसेन्स नै रद्द गर्ने प्रावधान राखियो । त्यसपछि क्यासिनोमा नेपाली प्रवेशमा कडाइ भयो । सोही कडाइपछि मिनी क्यासिनोहरू फस्टाएका हुन् । जुवाडे र जुवामा पैसा लगानी गर्नेहरूले नै यसरी मिनी क्यासिनो चलाउन थालेका हुन् ।
नायिकादेखि पूर्वमन्त्रीसम्म पक्राउ
जुवाखालबाट नायिका, गायिका तथा पूर्वमन्त्रीसमेत पक्राउ परेका छन् । करिब ५ वर्षअघि गायिका सिर्जना विरही थापा नयाँबजारस्थित एक जुवा अखडाबाट पक्राउ परिन् । त्यस्तै, नायिका करिश्मा मानन्धर महाराजगन्जको एक जुवाखालबाट दसैँका वेला पक्राउ परेकी थिइन् । तत्कालीन गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले काठमाडौं प्रहरीका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी राजेन्द्र श्रेष्ठलाई दबाब दिएर मानन्धरलाई मुद्दा नचलाई छाड्न आदेश दिएका थिए । पक्राउपछि करिश्माले आफू जुवा खेल्न नभई चिनजानको व्यक्तिलाई भेट्न मात्र गएको बताएकी थिइन् । दुई वर्षअघि गौशालाकै एक जुवाखालबाट पूर्वमन्त्री सत्यमान लामासमेत पक्राउ परेका थिए । त्यस्तै गत वर्ष पिंगलास्थान विजयचोकबाट सिआइबीमा कार्यरत प्रहरीद्वय मनराज तामाङ र दिलबहादुर तामाङसमेत पक्राउ परेका थिए ।
श्रीमान विदेशमा पसिना वगाउने, श्रीमति स्वदेशमा पैसा उडाउने
प्रहरीले गत वर्ष गौशाला विजयचोकस्थित हेमन्त राईले सञ्चालन गरेको जुवाघरबाट ८ लाख ४८ हजार रुपैयाँसहित २५ जनालाई पक्राउ ग¥यो । जसमा रेनु घलान, सुन्तली घरान, हेमा गुरुङ, कमलासिंह ठकुरीलगायत महिला थिए । प्रहरीका अनुसार उनीहरूका श्रीमान् रोजगारका लागि विदेशमा छन् । उनीहरू भने विदेशबाट श्रीमान्ले पठाएको पैसा लिएर पुरुषहरूसँग जुवा खेल्दै आएका थिए । नयाँ पत्रिकाबाट